RASMI: Kooxda Sevilla Oo Shaqada Ka Ceyrisay Vincenzo Montella – Gool FM
RASMI: Kooxda Sevilla Oo Shaqada Ka Ceyrisay Vincenzo Montella
(Sevilla) 28 Abriil 2018 Sevilla ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay shaqada ka eriday macalinka reer Talyaani ee Vincenzo Montella, sababa la xidhiidha natiija xumida kooxda ku timid xiliyadii dhawaa ee lasoo dhaafay.
Go’aanka deg-dega ah ayaa yimid ka dib guuldaradii 2-1 ahayd ee Sevilla xalay kasoo gaartay kooxda Levante kulankii furitaanka kulamada 35-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Vincenzo Montella ayaa loo magacaabay shaqada tababarka ee kooxda Sevilla bilawgii sanadan 2018, kadib markii sidoo kale laga soo ceeriyay kooxda AC Milan.
Montella ayaa hogaaminayay Sevilla 28 kulan waxayna xili ciyaareedkan gaareen wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League, kadib guushii ay ka gaareen kooxda Manchester United, taasoo ka dhigtay In maamulka kooxda ay fursad u siiyaan inuu sii leeliyo kooxda.
Laakiin tan iyo guushii ay kaga gaareen kooxda Manchester United tartanka Champions League, Sevilla ayaa ku soo laabatay natiijooyin xun, iyadoo aysan kooxda wax guul ah gaarin 11-kii kulan ee ugu dambeeyay, waxaan guul ay gaarto ugu dambeesay kulankii Old Trafford ay kulan ciyaartay Unitedka.
Juventus oo labo xiddig ka doonaysa Tottenham
Klopp oo lagu eedeeyay ixtiraam xumo kadib kulankii galabta ee Stoke City (Arag wixii uu sameeyay)